SONSAF | Guddida Doorashooyinka Qaranka Iyo Saddexda Xisbi Qaran Oo Kala Saxiixday Xeerka Anshaxa Doorashada
Guddida Doorashooyinka Qaranka Iyo Saddexda Xisbi Qaran Oo Kala Saxiixday Xeerka Anshaxa Doorashada
Munaasibad si qurux badan loo soo agaasimay oo ka dhacday Hotel Burj OOmaar ee magaalada Hargeysa ayaa saddexda xisbi qaran ee Somaliland iyo guddida doorashooyinku qaranku ku kala saxiixdeen xeerka doorashooyinka foodda innagu soo haya ee golayaasha deegaanka iyo wakiillada.
Madashan oo ay soo agaasintay dalladda ururrada bulshada rayidka ah ee SONSAF ayaa waxa hadalkii furitaanka halkaa ka jeediyay guddoomiyaha dalladda ururrada bulshada rayidka ah ee SONSAF mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame, isaga oo u mahadnaqay saddexda xisbi Qaran iyo Komishanka doorashooyinka sida ay u soo ajiibeen martiqaadkii ay dalladu u fidisay, waxaanu intaa ku daray in ay tahay maalin taariikhi ah oo muhiimad weyn u leh habsami u socodka doorashooyinka dalka.
Sidoo kale munaasibadda waxa hadal dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka Somaliland mudane Cabdirashiid Maxamuud Cali(riyo raac), isaga oo u mahadnaqay qaybihii kala duwanaa ee ka soo shaqeeyay xeeerka anshaxa doorashada sida garyaqaannadii iyo masuuliyiintii xisbiyada ee soo diyaariyay xeekan. waxaanu intaa ku daray in xeerkani muhiimad weyn u leeyahay habsami u socodka doorashooyinka is barkan foodda innagu soo haya isla markaana cid kasta oo saxiixda ay waajib ku tahay inay ku dhaqmaan.
Masuuliyiin ku hadlaysay afka saddexda xisbi qaran oo madasha hadallo kala duwan ka soo jeediyay ayaa dhamamaantood si weyn u soo dhaweeyay xeerkan anshaxda doorashada, waxaana ay ballan qaadeen inay ku dhaqmi doonaan xeerkan.